လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းများ နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
ကျနော်တို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်များမှာ Taiwanထုတ်လုပ်သူ, ပို့ကုန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအတွက်ဆက်ဆံရေးမှာကြောင်း -based ကုမ္ပဏီ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းများ ကျယ်ပြန်အကွာအဝေးနှင့်အတူ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ၏-on အချိန်ပေးအပ်ခြင်းကိုသင်တို့အားပေးအာမခံထားသောမြင့်မားသောအရည်အချင်းပြည့်မီအပ်နှံထားသောလုပ်သားအင်အားရှိသည်။ သင်သည်မည်သည့်စတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
Computer connector အစိတ်အပိုင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။-ထုတ်ကုန်ရောင်း,အီလက်ထရွန်နစ် စက်ရုံကြီးတွေဆီ ပို့ပေးတယ်။,အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ
588 အီလက်ထရွန်းနစ် အစိတ်အပိုင်းများ,Micro Connector Plug Ground Contact,၁၀.86*13.75mm
ပို့ဆောင်မှုပမာဏအလိုက် ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များကို ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။
နမူနာ သို့မဟုတ် ပုံများအတိုင်း ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီး လုပ်ဆောင်ပါ။,နမူနာများကို ပေးနိုင်ပါသည်။,ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးတိုင်းတာခြင်း။,အမြန်နှင့်တည်ငြိမ်သောထုတ်လုပ်မှု
TS16949 ISO90001 Certify နှစ်မျိုးလုံး
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.stampingparts.org/my/electrical-connector-parts.html
အကောင်းဆုံး လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းများ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းများ မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
Computer connector အစိတ်အပိုင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။-ထုတ်ကုန်ရောင်း,အီလက်ထရွန်းနစ် စက်ရုံကြီးတွေ သုံးတယ်။,အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း။,ထုတ်ကုန်မျိုးစုံ. 597 အီလက်ထရွန်းနစ်အပိုင်း,လယ်-ပန်းကန်,၈.76*0.28mm လျှပ်စစ်ပစ္စည်း,မိုဘိုင်းဖုန်းများ,ကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများ ပို့ဆောင်မှုပမာဏအလိုက် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုင်းတာခြင်း။,တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေး,စဉ်ဆက်မပြတ်မှိုထုတ်လုပ်မှု,အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း။,ပုံဆွဲမှုအရထုတ်လုပ်သည်။,စမ်းသပ်ရန်အတွက် နမူနာပေးနိုင်သည်။ SUS ပစ္စည်း ISO90001 TS16949 လက်မှတ် ထိုင်ဝမ်ထုတ်ကုန်